Zvaunofanira kuita kana iyo Apple Watch isingashanduke kana isingashande zvakanaka | IPhone nhau
Zvaunofanira kuita kana iyo Apple Watch isingashanduke kana isiri kushanda nemazvo
Ignatius Room | | Apple Watch, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Iyo Apple Watch chishandiso chakazara nema sensors uye ine tekinoroji yepamberi inoshanda mumamilimeta nenzira. Asi zvakare chishongedzo cheiyo iPhone, iyo inotibvumidza kuita akasiyana mabasa izvo zvikasadaro zvinotimanikidza kutora iyo Apple Watch kubva muhomwe kana bhegi. Asi sechigadzirwa, unogona kusangana nenyaya dzekuita. Mazhinji ematambudziko anogona kutaridzika kwatiri zuva nezuva-ane mhinduro iri nyore, kunyanya iwo ane hukama neapo Apple Watch skrini iri nhema. Kubva kuActualidad iPhone isu tichaedza kugadzirisa matambudziko akawandisa anomuka achishandisa Apple Watch.
1 Gadzirisa matambudziko neApple Watch
1.1 Apple Watch ine dema chidzitiro
1.2 Apple Watch inoratidza nhema screen asi nguva iri green
1.3 Apple Watch inoratidza dema chidzitiro chine girini nguva uye tsvuku mheni bhaudhi icon
1.4 Apple Watch inotangazve nechitema screen uye ini ndinonzwa mazwi
1.5 Apple Watch skrini uye mabhatani haateereri
1.6 Paunotenderedza iyo Apple Watch haina kuenda kupfuura apuro
Gadzirisa matambudziko neApple Watch
Kana iwe ukawana dambudziko risiri mune rondedzero, rinyore mumashoko uye isu tichaedza kukupa mhinduro.
Apple Watch ine dema chidzitiro
Kana iyo Apple Watch skrini yakasviba zvachose uye mabhatani ari paApple Watch asingapindure kune chero kudyidzana, zvinowanzoitika kuti mudziyo unodzimwa kana hauna bhatiri rakakwana sekuratidza pachiratidziri kuti chinoda kutakurwa kuitira kuti chishande.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kudzvanya padivi bhatani uye mirira kuti uone kana Apple Watch ichitendeuka. Zvikasadaro, tinogona kuitangazve nekudzvanya bhatani repadivi uye vhiri remenyu kwemasekondi gumi. Kana nzira iyi ikasashanda, chishandiso chine bhatiri rakazara zvachose.
Apple Watch inoratidza nhema screen asi nguva iri green
Kana chishandiso chako chiri kuratidza iyo nhema skrini, pamwe nenguva iri yegreen uye isingapindure kune chero eepadivi mabhatani ekupa iyo yekushandisa menyu kana kuwana kune vanobatika, iyo Apple Watch iri mubhatiri yekuchengetedza modhi.
Bhatiri yekuchengetedza modhi inogona kuva shandisa manyore apo Apple Watch inosvika 10%. Panguva iyoyo mudziyo unotiratidza meseji inotizivisa kuti tiibhadharise kana kumisikidza bhatiri yekuchengetedza modhi. Panguva iyoyo, chishandiso chinongotitaridza iyo nguva, kurasikirwa nekubata kubata nechigadzirwa, ichiita wachi inodhura.
Apple Watch inoratidza dema chidzitiro chine girini nguva uye tsvuku mheni bhaudhi icon
Kana mudziyo wedu ukatiratidza iyo nhema skrini inoratidza iyo nguva uye icon ine red ray mukati, senge mune yakapfuura kesi, iyo Apple Watch iri mukati bhatiri yekuchengetedza modhi. Mune ino modhi, kutaurirana kwese neiyo iPhone kwarasika, saka tinogona kungotarisa nguva.
Mune ino yekuchengetedza bhatiri modhi, iko kushandiswa kweiyo wachi kushoma, asi kunouya nguva apo isu tinofanirwa kuitakudza uye ndipo panobuda iyo icon tsvuku nemheni mukati. Kugona kuburitsa bhatiri yekuchengetedza modhi, unofanirwa kutangidza chishandiso nekukanya bhatani repadivi uye bhatani regumbo pamwechete kwemasekondi gumi kusvikira logo yeApple yaonekwa.
Apple Watch inotangazve nechitema screen uye ini ndinonzwa mazwi
Kana iyo skrini yeApple Watch yedu yadzimwa asi isu tinonzwa manzwi anobva mairi, dzikama, hatisi mapenzi, zvakapusa isu takaita kuti Inzwi Rekuwanika sarudzo. Kuti tiite kuti isabatika tinofanirwa kuenda kuApple Watch application kana tinya pavhiri tobvunza Siri kuti aribate.
Apple Watch skrini uye mabhatani haateereri
Kana mudziyo wedu uchiratidza zvirimo, skrini irimo, asi isu hatigone kuitora kuti ipindure kuchiratidziri kana mabhatani enyama, chinhu chekutanga chatingaite kuigadzirisa ndiko kuitangazve. Kuti tiite izvi tinofanirwa kumanikidza vhiri rerutivi pamwe chete neApple Watch bhatani kwemasekondi gumi, kudzamara logo yeApple Watch yaonekwa zvakare. Kana iwe uchinge wagadzirisa iyo Apple Watch uye zvese chidzitiro uye mabhatani achiri kusapindura, mhinduro chete kutora mudziyo kuApple Chitoro.
Paunotenderedza iyo Apple Watch haina kuenda kupfuura apuro
Kana isu tikaedza kubatidza yedu Apple Watch, asi chishandiso hachipfuure apuro kana kumira kurega kutanga, chinhu chekutanga chatinogona edza kuitangisa patsva nemaoko, nekutsikirira padivi vhiri uye bhatani reApple Watch kwemasekondi gumi.
Kana chishandiso ichiri kupfuudza block, chinhu chakanakisa kutora icho kuApple ChitoroNekuti chero chikonzero, pamwe bhuti system tambo iri kukonzera matambudziko. Nehurombo isu hatigone kuibatanidza kune yedu Mac uye kuisazve firmware kubva kumba kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvaunofanira kuita kana iyo Apple Watch isingashanduke kana isiri kushanda nemazvo
Mune yangu, mafomu mazhinji haavhure, kuvhara kana kugara mudenderedzwa rekumirira uye kubva ipapo hazviitike.
Changu chakafanana uye ini ndatova nefekitori kuiseta kanokwana ka3 mumwedzi mitatu. Facebook Messenger haisati yambovhurwa kubvira ipapo.
Ignatius Room akadaro
Chinhu chimwe chete ichocho chinoitika kwandiri uye zvisinei nekuti ndobvunza Apple zvakadii, zvese zvavanoita kupomera mushambadzi wekushandisa Tumira mazai.
Edza kuibvisa kubva ku iPhone uye wozoidzorera kuburikidza neawa mumasetingi, uye usatakure chero backup. Mune mamwe mazwi, iwe unotanga kubva pakutanga.
Clockmaker MbiriZero Pfungwa akadaro
Ngatizvitarisei izvi, ruzhinji rwemaapplication anoita sekunge akagadziridzwa nekukurumidza uye zvisina kunaka (Uye maapplication mazhinji izvo zvisati zvagadziriswa kuWatchOS 2). Kunyange isu tisiri kuzotaura kuti wachi inokurumidza kwazvo, zvakarongedzwa zvakanaka zvemaapplication zvinoshanda chaizvo.
Uye zvechokwadi, kana iwe ukaisa mumwe muenzaniso wechikumbiro chisingashande, pamwe ndinonzwa kunzwira tsitsi zvishoma, asi ndiri kubva paFacebook ... Kuti ivo vanoramba vachizvipira ivo pachavo kune iyo webhu kuronga kweiyo portal yavo, uye vosiya iyo kunyorera chirongwa kune chaiwo mapurogiramu, ndapota 😉
Pindura Mutariri weWatchmos DosPuntoZero
Zvakanaka wachi mugadziri dospuntocero asi kana tikadzokera kumashure ndakaedza iyo yekutanga iPhone payakabuda uye vanga vasina kana chitoro chekushandisa vakatora foni asi vaingova vatsva, chokwadi ndechekuti Apple ichiri kufanira kusvina zvakawanda kubva kuApple Watch asi zvakadaro watchOS 2 iri murombo kwazvo uye haina kugadzikana. nekufamba kwenguva hatichataura izvozvo.
Xavier Alonso akadaro
Mhoroi vanhu vese. Dambudziko reWatch risingabatanidze neyechitatu-bato kunyorera, ndiyo backup. Iko hakuna kushandiswa kwekutanga nguva, mhinduro chete ndeyekuisazve iyo iPhone sekopi nyowani. Haisi mhinduro yakakwana, nekuti kusvikira mawatchOS akagadziridzwa isu tichaenderera mberi nedambudziko mumawachi edu nekukurumidza patinongoita shanduko mumakopi otomatiki, asi kwenguva iyo inoigadzirisa.
Pindura Xabier Alonso
Kuti uve wechokwadi zvachose, ndeye Apple inopa iyo SDK nemaAPI ayo, kana ichishanda sedhongi, maapplication haakwanise kuita chero zvishamiso.
Icho chigadzirwa chisina kupera, apuro inochiziva uye nevanogadzira zvakare, akabatwa ndiye mushandisi akazvitenga. (Iwe wakanyeverwa, hazvina kunaka kuti usatombotenga iyo yekutanga vhezheni yechinhu)
Ndine matambudziko akafanana semuenzaniso: iyo Soundhound app inoshanda zvakakwana, ini ndakaisa Shazam uye iyo app haivhure uye ndomaitiro avasina kuvhura kwemakore akati!
Mhoro shamwari, ndakave nezvinetso kuti zvaisaitika kuapuro uye mushure mekuyedzwa kwakawanda nzira chete yandakakwanisa kubuda muchiuno ichocho iri muApple yekushandisa application muchikamu chekutanga Apple Tarisa iwe unopinda uye ubatanidze yako Apple Watch kubva ku iPhone uye wozoedza kubhadharisa uye unotanga nekudzvanya korona uye bhatani remagetsi panguva imwe chete kusvikira apuro yaonekwa.
Ndinovimba izvi zvinoshanda sekushandira kwandakaita, kunyangwe ndine matambudziko ekudhirisa bhatiri.
Ndine iyo wachi yeApple yakaburitswa, zvisinei yaive yakabatana nebhatiri husiku hwese uye wachi iri kupisa asi haina kubatidza, chii chandingaite?
Pindura kuna Fabian
Izvo zvinoitika kwandiri
Ndine dambudziko nemutumwa, pandinoivhura, inoramba yakanamatira mukutakura (mudenderedzwa rakamirira) kubva ipapo haina zvimwe zvainoita, chii chandingaite?
Maria Vega akadaro
Ini ndaive muzuva neApple Watch uye uye pandakanga ndichida kuona iyo nguva yakanga isisashande! Akafa! Ini ndatoitakura uye haichashandi, haina mhinduro kune chero chinhu. Pane mumwe munhu angandibatsira here. Ini handidi kuudza baba vangu.
Pindura kuna Maria Vega
Jonathan Vila Arissa akadaro
Kubva nezuro pandinotenderedza ruoko rwangu haina kubatidza
Pindura kuna Jonatan Vila Arissa
Mhoro. Wangu wachi yeapuro inoerekana yadurura bhatiri mune rekodhi nguva, isingasviki maawa matatu. Pasina kushandisa chero app. Uye zvakare, nguva dzese padzinoenda nhema uye ini ndoda kuishandisa, ndinofanira kukiya mune yekuvhura kodhi. Zvakaitika kune mumwe munhu here ?? Ndatenda
Mhoroi, ndine mubvunzo nezuro manheru ndichitarisa pachiratidziro chewachi yangu yeapuro handizive zvandakadzvanya uye sikirini yakaonekwa yaiti kudzima zvese zvine mutsvuku ndakaedza kubuda asi handina kukwanisa uye zvakafanana nefoni yakatemwa uye iyo imwechete skrini inoenderera.
Pindura kuna Ruva
Kwaziso ndine mamiriro nemawachi yangu yemuapuro, kwakapisa uye ndikaisa mucherechedzo wakanyanyisa kupisa pachiratidziri, uye mushure mekuti pasina chibharo uye hachizungunuke, chete kana uchibatanidza unoisa tambo nechikamu chegirinhi icho chiri kuchaja asi haina kubatidza kana chero chinhu
Pindura kuna harllenews
jhoan manuel akadaro
Iyo apuro inoratidzika ndinobatanidza charger uye inonzwika asi haina kubatidza handizive kana iri tambo kana wachi
Pindura kuna jhoan manuel
Daniel hourcade akadaro
Iyo haina kubatidza iyo Apple Watch, denderedzwa dzvuku rinowoneka nechiratidzo! (zvakare yakatsvuka) pakati nepazasi peinotevera: http://www.apple.com/help/watch
Pindura kuna Daniel Hourcade
Rodrigo rapela akadaro
Mhoro kwandiri ndinogara mumhepo ndege uye haina kunditendera kuti ndiite chero chinhu, nekuti haina kubatana ... pane mumwe munhu angandibatsira here kana kuti ndinofanira kuenda kuchitoro chemaapuro? Ndatenda
Pindura Rodrigo Rapela
carlos irazoqui akadaro
shamwari, wachi yangu yeapuro yakanamatira, haindibvumidze kumanikidza kutangazve, sezvo ini ndichidzvanya mabhatani maviri kwemasekonzi gumi, uye hapana chinoitika,
Ini ndinogara ndichiishandisa mumodige yendege, uye pandakanga ndichida kuiisa, haina kutakura?
batsira kana vachikwanisa
maita henyu kukumbundira
Pindura carlos irazoqui
Handina kugamuchira notices kwemazuva maviri. NeChitatu yakangoerekana yadzimwa masikati (kwemakore matatu ndiyo nguva yekutanga yaakazviita), ndakaiisa pacharge uye yaitaridzika kunge yakanaka; asi haina kundibatanidza neiyo iPhone, inoti yakabatana asi haivhure maapplication uye handikwanise kuona kushandiswa kweiyo wachi pane iphone, zvinoita sekunge iwo maviri madivayiri haana kunzwisiswa.
yangu inodzima uye inoenderera yega nguva dzese uye pasina kuibata, handizive kuti sei
Mhoroi masikati akanaka, kuyedza kwakawanda kusingabudirire kunoonekwa pachiratidziro cheApple Watch yangu zvichiramba, gadzirisazve wachi wozoibatanidza. Asi hapana chimwe chaanondipindura
Gustavo Boronat akadaro
Ini ndakagadzirisa muIWatch 3 kusvika mushanduro 5 uye iyo skrini yakava monochrome
Pindura Gustavo Boronat
Yangu aple wachi ndeye akateedzana 1 uye kana ndikairongedza mushure mechinguva inondiudza yakawanda yakakundikana kuyedza kubatanidza zvakare, uye ini ndakaibatanidza kanoverengeka uye zvakaitika zvekare.
Ini handikwanise kutsvedza, kazhinji yenguva, iyo yekuzivisa menyu uye bhatiri menyu. Unoziva here kuti nei zvichidaro?
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, ndine itsva se se, ndakatora kuApple technical service, vakaita muyedzo kwemaawa maviri neimwe iPhone uye zvese zvakanaka, zvinoitika kwandiri kamwe pazuva chero nguva uye Ini handina mhinduro, wakapihwa mhinduro here?
Pindura kuna angela
Mhoro zuva rakanaka.
Ini ndinoshandisa wachi kunyanya kudzidzira kushambira, vhiki rino kamwe kamwe mune yemahara yekushambira modhi, ndakaona kuti panoratidza mamita auri kushambira kamwe kamwe yakaisa huwandu hwakawandisa mazana maviri emamita, pamaminetsi gumi ndakaitarisa futi uyezve Icho hachina kuratidza chinhu, chingori 200000 metres kana kureba, asi chinoda kuziva nekuti gare gare paunopedza chikamu zvese pa iphone uye pawatch imwechete kana ichiratidza zvakanaka, mumwe munhu angandiudza zvingave zviri kuitika uye mhinduro.
maita basa kwaziso
Pindura kuna samueri
yangu apuro wachi yakateerana 3 ine nhema nhema asi iine yakazara bhatiri. Ini ndinonzwa ichidedera kana iwe ukaisa meseji asi ini handisi kuona chero chinhu
Pindura kuna ALE339
Mhoroi, wachi yangu haina kunyoresa chero mashandiro. Hapana nhanho, kurova kwemoyo kana chero chinhu. Ipapo anoita zvese. Ndakaitazve, ndikabvisa uye nezvose zvandaigona kuwana paInternet. Ndapota ndinoda rubatsiro neizvi. Ndatenda
Ndine AW SE itsva mwedzi wapfuura, zvinoitika kwandiri kuti kana ndichida kuenda kunzvimbo yekuzivisa uye yekudzora, handikwanise kuiwana, nekuti ini handikwanise kutsvedza chidzitiro nemunwe wangu pasi kana kumusoro, zvinoita sekunge iyo sikirini yakanamatira, zvese zvimwe zvese zvinoshanda zvakanaka, kunyangwe ndikatsvedza kuenda kumativi kuti ndione mamwe mabutiro, zvese zvakanaka, kungotsvedza uye kudzika, izvi zvinoitika kamwe pazuva uye ndatozvitora kune basa rakatenderwa neapuro asi havana kuwana mhosva, ini ndinoramba kuti nditangezve mazuva ese kuti igadziriswe. Ndokumbirawo mubatsire.
Yangu Apple Watch Series 3 haizoshanduke. Uye iwe unoona mutsetse chena pamusoro peiyo wachi
Gadzirisa matambudziko esvomhu neako smartphone kamera sezvavanoita muEl Hormiguero
Lavabit: "Kana FBI ikakunda, makambani anogona kutiza United States"